2013 November | MoeMaKa Burmese News & Media
ဇော်အောင် (မုံရွာ) – Serge Pun @ ဦးသိမ်းဝေ
Serge Pun @ ဦးသိမ်းဝေ (born 1953) SPA Group, Myanmar, Singapore, Hong Kong, Thailand, China ..etc. ဇော်အောင် (မုံရွာ) နုိုဝင်ဘာ ၃၀၊...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – သူ့ကုိုများ ညွှန်းဆုိုရော့လေသလား …?
သူ့ကိုများ …ညွှန်းဆိုရော့လေသလား..? မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) နုိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃ မျက်နှာလေးတချက် တင်းမာခိုက် ၊ မျက်စောင်းလေးတချက်စွေအကြည့် ခိုက် ၊ ကာယကံရှင်သာမက ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်းလူအစုစု၊ ဘဝဆောက်တည်မရ အလဲလဲအပြိုပြို ဖြစ်စေခဲ...
အနိစ္စတရာသုို့ အလည်အပတ်သွားခြင်း (ဖျော်ဖြေမှုအစီအစဉ်) နုိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃
မြန်မာပြည်ရဲ့ အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆုိုင်ရာရဲ့ ၆၅ နှစ်မြောက် လူ့အခွင့်ရေးနေ့အခမ်းအနား ချမ်းမြ (မုိုးမခအထောက်တော်) နုိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့ (HRDP) ၏ ယခုနှစ် အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက်ကျင်းပမည့် (၆၅) နှစ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ...
“၁၃၀၀ပြည့်အရေးတော်ပုံ” စိန်ရတုကို မျက်နှာဖုံးတင်ထားသော ပိတောက်ပွင့်သစ် ဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာလထုတ်ပိတောက်ပွင့်သစ် စာပေအနုပညာမဂ္ဂဇင်းကို “၁၃၀၀ပြည့်အရေးတော်ပုံ” စိန်ရတု အကြောင်းအရာကို မျက်နှာဖုံးတင်ပြီး ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း အလင်္ကာ စာအုပ်တိုက်ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာတွင် ယနေ့ ဖော်ပြထားသည်။...
ကာတွန်းစောငုို – ယတြာ
ယတြာ ကာတွန်း – စောငုို နုိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃
ဆောင်းလူ – ကျွန်
ကျွန် ဆောင်းလူ နုိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ xxxx ကျွံဆင်းသွားပြီ … မရည်ရွယ်ပါပဲ … ဥနှောက်ကုိုဖောက်စားသူတုို့ထံမှာမှ ..ကျွန်ခံဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ် …။ ဆုိုးလှသည် ..။ အုိုင်ဒီယာမရှိ ..။ အနုပညာမရှိ …။...
ကာတွန်း – ဇေမှိုင်း (ဥက္ကလံ) – ခုမှ လဲကောင်းတုန်း
ခုမှ လဲကောင်းတုန်း ကာတွန်း – ဇေမှိုင်း (ဥက္ကလံ) နုိုဝင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃
ရန်လင်းအောင် – အရပ်ပွဲ
အရပ်ပွဲ ရန်လင်းအောင် နုိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ ဟာသတွေက မှန်တယ် ။ အတည်ပြောတာ ရယ်ရတယ် ။ ရေသန့်ဗူးနဲ့ပေါက်ပေါက် ခဲနဲ့ပဲထုထု ဆဲလိုက ဆဲ၊ ဆိုလိုက ဆို အတီးမပျက် အဆိုမပျက်...
တို့ဗမာပြည်ကို တိုင်းရင်းသားကုန်စင် တို့ပြည်လုို့ မှတ်ထင် ကေသွယ် နုိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်.. ဒီနေ့ အမျိုးသားနေ့ ဆိုတာ ကိုတောင် သတိမေ့ နေခဲ့တယ်။ အခါတိုင်းလို နှိုးဆော်မူ ဆန်ဆန် ...
ပြည်တွင်းညီညွတ်ရေး အကြံပေးအဖွဲ့ သန်းဝင်းလှိုင် နုိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အမှတ် ၁၆ ၊ ဝင်ဒါမီယာ (ယခု...
ကာတွန်းစောငုို – တပ်မပါဘဲ ဘာမှမလုပ်ရ
တပ်မပါဘဲ.. ဘာမှ မလုပ်ရ ကာတွန်းစောငုို နုိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃
မုိုးမခမိတ်ဆွေ – Wisconsin ပြည်နယ် Milwaukee ကထိန်အလှူပွဲသတင်းမှတ်တမ်း
Wisconsin ပြည်နယ် Milwaukee ကထိန်အလှူပွဲသတင်းမှတ်တမ်း မုိုးမခမိတ်ဆွေ နုိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ Wisconsinပြည်နယ် Milwaukee မြို့မှာရှိတဲ့ ဆရာတော်ဦးဇာဂရ (စာရေးဆရာကံထွန်းသစ်) သီတင်းသုံးတဲ့...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – ပထမ…၊ ဒုတိယ…၊ တတိယ….၊…..၊…….၊…..
ပထမ…၊ ဒုတိယ…၊ တတိယ….၊…..၊…….၊….. မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) နုိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ တရက်ပြီးတရက်ကုန်ဆုံးခဲ့  ၊ တပတ်ပြီးတပတ်ကျော်လွန်ခဲ့  အချိန်နာရီ စက်ဝိုင်းက မရပ်မနားလည်ပတ်ဆဲ လည်ပတ်နေတဲ့ အချိန် အဝေးတနေရာ...
ငြိမ်းချမ်းရေး ကာတွန်းစောငုို နုိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃
သန်းဝင်းလှိုင် – ကန္ဒီစာချုပ်
ကန္ဒီစာချုပ် သန်းဝင်းလှိုင် နုိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးသောအခါ အမြဲတမ်း ဗမာ့တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စ ပေါ်လာသည်။ ထိုစာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပထမတွင် ဗြိတိသျှအစိုးရနှင့် မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များအတွင်း သဘောထားချင်း မတူကြပေ။...